Home Wararka Shabab iyo Dowladda oo ka jawaab celiyay warqaddii uu qoray wakiilka QM
Shabab iyo Dowladda oo ka jawaab celiyay warqaddii uu qoray wakiilka QM
Reading Time: 2 minutes[su_heading size=”21″](Ma jira xiriir ka dhexeeya dowladda & Shabab)[/su_heading]
Faah-faahin cusub ayaa kasoo baxaysa madaafiic xooggan oo maanta lagu garaacay xaafadda Xalane ee degmada Wadajir, ee magaalada Muqdisho, waxaana ku dhaawacmay dhowr qof, oo ay ku jiraan laba nin oo ajnabi ah sida ay OL u sheegeen dad ku sugan gudaha xarunta Xalane.
Madaafiicdaas oo aan ilaa iyo hadda la garan halka laga soo tuuray ayaa jugtooda waxaa laga maqlay inta badan xaafadaha degmada Wadajir, waxaana dadka Xaafadaas ay sheegeen inay maqleen jugta ilaa afar madfac.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in gudaha xarunta Xalane ee beesha caalamka ay ka degan tahay Muqdisho ay ku dhaceen qaar ka mid ah madaafiicda, balse aan weli la garan karin khasaaraha ka dhasahay.
Markii ay soo baxday warqaddii loo diray Dowladda Federaalka ah aya waxaa hadalo hanjabaad ay ka muuqato soo dhigay bartiisa twitterka la taliyaha amniga MW. Farmaajo wuxuuna qoray “Haddii aad mas la ciyaarto, kutalo gal in uu ku qaniino” Hadalka aya loo fasirtay in uu ula jeeday in wixii maanta dhacay ay dhici doonaan.
Ilo xogogaal ah oo la hadlay MOL aya u sheegay in tani ay jawaab u tahay warqaddii uu shalay wakiilka QM Nicholas Haysom uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya gabood falkii ka dhacay doorashadii Koofur Galbeed.
Waxaa dad badani aaminsan yihiin in uu jiro xiriir hoose oo ka dhexeeya shaqsiyaad mug ku leh dowladda iyo kooxda Al Shabaab. Shaqsiyaadka la aaminsan yahay in ay xiriir toos ah la leeyihiin Shabab aya waxaa ka mid ah
Fahad Yasin – Ku simaha agaasimaha NISA
Xasan Cali Kheyre – RW Soomaaliya
Zakariya Ismaaciil – Madaxa Sirdoonka NISA (Madaxii hore ee Sirdoonka Shabab)